FAQ - Shenzhen Byland Inogona Kupakata Co, Ltd.
Ini ndakagadzirira kuisa odha yangu. Ndeipi nhanho yangu inotevera?
Pane nzira dzinoverengeka dzekuisa odha.
1. Fonera hofisi yekutengesa pa +86 0755-84550616.
2. Email kana Whatsapp mutengesi.
3. Tin Mafomu Mafomu, zadza zvachose uye EMAIL kwatiri kwatiri pa sales@bylandcan.com.
Ndeapi mafomu ekubhadhara aunogamuchira?
T / T, Western Union, L / C kana Tarisa pamberi kana pasina account yakasimbiswa.
Ndeupi iwo mudiki odha weStock Tini?
500 matinji akazara, makesi akazara echinhu chimwe nechimwe chinosarudzirwa matani akajeka pasina kudhinda.
Ndeupi iwo mudiki odha weCustom Tin?
Zvichienderana nesaizi uye chimiro chetini huwandu hwenzvimbo iri zviuru zvishanu - zviuru makumi maviri nezvishanu. Zvinhu zvinoda chishandiso chitsva zvinoda hushoma hukuru uye yakareba-nguva yekutungamira. Ndokumbirawo muzadzise tsika tini kubvunza isu kana kufonera wekutengesa mumiriri kuti uwane rumwe ruzivo pane edu mashoma maodha. Ndokumbirawo utibate isu kuti uwane ruzivo nezve yako chaiyo kubvunza.
Tinoda tsika inogona ine zita redu pairi. Ichi chinhu chinowanikwa neNyika here?
Hongu. Nenyika Inogona kupurinda tsika lithography pane simbi, iri-mumba, uchishandisa mamiriro-e-iyo-e-e-6 mavara ekudhinda mutsara. Tine dhipatimendi rakazara reArt Services uye nedhipatimendi rePressress kutungamira vatengi kuburikidza nematanho. Isu zvakare tine dhijitari yekudhinda kugona kune mashoma madiki.
Ini ndinoda gaba kungoti kureba / kukura kudiki pane saizi yako yemastock. Izvi zviri nyore kuita here?
Zvichienderana nekuvakwa kwetini isu tinokwanisa kugadzirisa kukwirira kwemataini akapoteredzwa kana epamusoro akaumbika zviri nyore nechishandiso chiripo chekushandisa chetsika odha. Seamless kana kudhonzwa tini zvinoda nyowani nyowani yekushandisa kune chero saizi yekugadzirisa. Isu tiri kugara tichivandudza nekudyara muhunyanzvi hwazvino hunowedzera kupa sarudzo kune vatengi vedu.
Tinoda tini yakajairwa. Inogona Byland Inogona kuburitsa zana% tsika tini saizi & maumbirwo?
Byland Can's Injini yehunyanzvi inogona kugadzira chimiro chitsva chemuchina wepamba wakapihwa nguva uye mari inodiwa kuti ifambise michina yekugadzira. Isu tinowanawo zvinhu zvitsva kubva kunzvimbo dzekunze kwenyika kana iri mhinduro yakanakisa yemutengiNevhu Unogona kuongorora chirongwa kuona nzira yakanakisa yekusimbisa kuunzwa kwechigadzirwa chemhando yepamusoro munguva inonzwisisika yenguva.
Ndeipi yako yakajairwa lead-nguva yetsika tini?
3-5weeks ine huripo tooling uye yako mifananidzo. Nemaitiro ese ari pasi peimwe denga kubva padanho kusvika pakupera, tinogona kupa kutonga pamwe nekuchinjika uye kuendesa nenguva kune vatengi vedu.
Mangwanani mangani ini ndinofanira kuraira kuti ndive nechokwadi chekuti ini ndichawana yangu Tsika Matin munguva yezororo?
Tinokukurudzira kuti uronge kumberi zvakanyanya sezvinobvira. Kutaurirana kwakakosha! Kana paine nguva dzakatarwa dzinoda kusangana neyakajairwa odha, rega mutengesi wedu azive nguva yakatarwa. Tinogona kushanda kudzoka kubva pazuva rekutakura uye nekupa nguva yekuwana yekutenga odha, hunyanzvi uye humbowo kubvumidzwa. Sezvo nezvose zvirongwa zvetsika, shanduko dzinogona kunonoka kuendesa kwekupedzisira kweodha yako. Nezvezvino kutungamira nguva titumire email kana kufona pa0755-84550616 uye utaure neMumiriri Wekutengesa.
Matini akachengeteka here kune zvigadzirwa zvekudya? Tinogona here kuwana tsamba inoti matini chikafu chakachengeteka?
Matai ekushongedza ipakeji inogamuchirwa yezvigadzirwa zvekudya. Tinogona kukurudzira kupfeka kwemukati kune izvo zvigadzirwa zvine acidic kana mvura yakavakirwa. Isu tinoshandisa inki dzakabvumirwa neDAA uye kupfeka uye tinogona kupa zvinyorwa kubva kune vatinopa. Isu tinoongororwa gore rega nevazhinji vatengi veFortune 500 uye tinosimbiswa kusangana nemipimo yepamusoro yevekudya-vanobata mapakeji vagadziri. Zvese zvivakwa zvedu iSQF2 Certified ne Safe Quality Chikafu Institute.
Ndeipi yako inotungamira-nguva yemastini tini?
2-3 mavhiki zvichienderana nemwaka uye kuwanikwa panguva yekuraira kwako. Kuzvipira kune chechokwadi chegore-kutenderera chirongwa chezvinhu zvese zvakaratidzwa, isu tinowanzoita zvirinani pane yedu yakatarwa-yenguva-yenguva.
Mangwanani mangani ini ndinofanira kuraira kuti ndive nechokwadi chekuti ini ndichawana odha yangu munguva yeMutambo weChirimo, uye nditore zvese zvangu tini?
Tinokukurudzira kuti uodze mumwaka wezororo wechando. Nekudaro, kana iwe ukasahodha panopera zhizha, izvi hazvireve kuti hauzowana matini ako. Isu tinoshanda kugara tichizadza pasi redu repasi. Kuti uwane ruzivo nezve yakatarwa hesera email isu kana kufona 0755-84550616.
Iwe unotakura sei uye chii chichava mutengo wekutakura uchave?
Byland Inogona Ngarava kuburikidza neVanojairika Vatakuri (LTL / TL). Isu tinotakurawo neUPS, DHL uye FEDEX patinokumbirwa nevatengi vedu, zvisinei iyi haisi nguva dzose sarudzo yakanakisa.
Sei usingakwanise kutumira kunze mangwana?
Byland Can Co haigone kutumira kunze zuva rinotevera, nekuda kweazvino nguva yekutumira. Byland Inogona kutungamira-nguva masvondo maviri. Tichaita, pazvinogoneka, kuyedza kutumira kunze nekukurumidza kana stock iripo uye nguva yekutumira inobvumidza. Mune zvimwe zviitiko vatapi vedu vanogona kutumira kunze nekukurumidza.
Takanganisa magaba. Inoratidzika kunge iri kugadzira kukuvara. Chii chatinofanira kuita?
Kana iwe wakagamuchira magaba iwe aunonzwa aine hunyanzvi hwekugadzira, tora anotevera matanho.
1. Dana mumiriri wako wekutengesa.
2. Tumira masampuli emataini. Izvi zvicharatidzwa kudhipatimendi redu reQA kuti zviongororwe.
3. Kamwe dhipatimendi redu reQA parakaongorora kukuvara, mumiriri wekutengesa achashevedza kuzokurukura zvakawanikwa.
Inoita kunge kukuvara kwemitoro. Chii chatinofanira kuita?
Kana iwe wakagamuchira magaba iwe aunonzwa aine kukuvara kwendege, tora anotevera matanho.
1. Ita zvinyorwa zvekukuvara kwese zvakananga paBill of Lading kana pafomu yekukuvara UPS kana FEDEX. Ukasaita zvinyorwa izvi unogona kusakwanisa kuisa chikumbiro chekukuvara.
2.Dana anotakura anotakura kuti aise chikumbiro. Ivo vanofanirwa kukufekitisa kopi yefomu yekukumbira kuti izadzwe uye faxed back.
Handina kugamuchira magaba ese andakaraira. Ndiri kuenda kunotora zvakasara pane yakazotumirwa gare gare?
Zvichienderana nenguva yegore, zvese zvigadzirwa kana saizi iwe zvawaraira zvinogona kana kunge zvisipo. Kana iwe usina kugashira matini ese pane yako odha:
1. Tarisa runyorwa rwekutakura kuti uone kana matini akadzorerwa kumashure here.
2.Kana zvinhu zvisipo zvadzorerwa kumashure, mamwe matini ako achatumirwa kwauri achangowanikwa. Kana iwe usiri kuda kugamuchira kumashure akarairwa matini, iwe uchafanirwa kufonera wako wekutengesa mumiriri kuti abvise mari yacho.
3.Kana iyo yekurongedza rondedzero isingaratidze zvinhu izvi zvadzorerwa kumashure, fonera anomiririra wekutengesa uye ivo vanofara kuziva kuti nei usina kugamuchira odha yako yakazara
Ndeipi iri nani Unganidza kana Pre-yakabhadharwa Freight?
Pazasi pane mutsauko uripo pakati pekubhadharwa kare uye kuunganidza zvakatumirwa.
1. Unganidza Zvakatumirwa: Kubhadhara kwekutakura kunofanirwa panotakurwa nhumbi. Cheki inoda kupihwa mutyairi usati waburitsa odha yako.
2. Pre-akabhadhara mitero: Byland Inogona Kambani ichawedzera mutengo wekutakura kune yako invoice. Iko kune mari yekubata yakashandiswa kune iyo odha.
3. Byland Inotakura ngarava mbiri Unganidza uye -Pamberi-kubhadhara Freight FOB Fekitori, pasina anosara.
FOB zvinoreva Kutakura Pane Bhodhi. Izvi zvinoreva kuti mutoro unova weiye mutengi panguva yaanosiya nzvimbo yeFOB. Zvese Zvikumbiro zvekutakurwa kwezvinhu zvinotarisirwa kuzadzwa neanounza anotakura, pasina anosara.
Unotumira COD here?
Nenyika Haikwanise kutumira COD.